Hiiraan Online News About Somalia » XOG: Shabaab oo abaabulka dagaal Mukhtaar Roobow Qorshe la mid ah ka bilaabay G/Baay & Bakool
XOG: Shabaab oo abaabulka dagaal Mukhtaar Roobow Qorshe la mid ah ka bilaabay G/Baay & Bakool
War ay heshay Wakaaladda Wararka Hiiraanka.com ayaa sheegaya in Ururka Al-Shabaab ee Gobollada Baay iyo Bakool ay isku diyaarinayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen Gulufka Colaadeed ee kaga soo wajahan saaxiibkoodii hore ee Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo hadda wadahadal kula jira Dowladda Soomaaliya.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay iney ka warhayaan abaabulka dagaal uu wado uu wado Mukhtaar Roobow, isagoo intaa ku daray inuu isku diyaarinayo sidii dagaal ka dhan ah Al-Shabaab loo qaadi lahaa.
Illo wareedyo ku sugan Gobolka Baay ayaa inoo sheegay in Al-Shabaabkii ugu xooganaa ay ka soo baxeen Gobolka Baay,islamarkaana isku uruursanayaan deegaan duleedka 30km ka xiga degmada Xudur ee Gobolka Bakool.
Ciidamadan Shabaab ayaa isku diyaarinaya sidii looga hortagi lahaa weerar kaga yimaada wadaadka ka goostay ee Mukhtaar Roobow iyo Ciidamo u gaar ah ay ku doonayaan iney Al-SHABAAB kaga saaraan guud ahaan gobolada Baay iyo Bakool.
Sidoo kale,Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamo badan oo ka tirsan dagaalyahanada AL-SHabaab ka baxay Gobolka SHABEELAHA kuwaasi oo ku sii jeeda Gobolka Baay si ay ugu biiraan dagaalka Mukhtaar Roobow Cali Abuu mansuur looga hortagayo.
Abuulka dagaal ayaa socda balse waxaa go’aanka kama danbeyska ah laga sugayaa madaxweynaha kOONFUR Galbeed SHARIIF XASAN,maadama uu yahay ninka ugu sareeyo Koonfur galbeed.